Wiil Soomaali ah Booliska Canada dileen oo banaanbax ka sameeyeen soomaalida CANADA. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Wiil Soomaali ah Booliska Canada dileen oo banaanbax ka sameeyeen soomaalida CANADA.
Wiil Soomaali ah Booliska Canada dileen oo banaanbax ka sameeyeen soomaalida CANADA.
Soomaali iyo Muslimiin badan ayaa dibad bax isugu soo baxay maagaalada Ottawa ee dalka Canada shalay.
Dadkaa ayaa ka careysnaa dilkii boolisku dhowr maalmood ka hor u geeystay nin Soomaali ahaa oo waxoogaa dhimirka la sheegay inuu ka jiranaa, kaasoo ay ka qabteen meel u dhow gurigiisa oo magaaladaa ah.
Ninkaa ayaa la sheegay inay garaaceen dabadeedna uu u dhintay jirdilkii ay u geysteen. Mudaaharaadeyaasha ayaa gaaray ilaa afaafka hore ee xarunta biliiska ee Ottawa shalay kadib sidii arxan darrada ahayd ee asbuucii hore ay u dileen Al-marxuum C/Raxmaan Cabdi.
C/Raxmaan Cabdi ayaa biliisku markii ay garaaceen waxay ku xireen jeebad asagoo dhulka yaal. Intaa kadib waxaa yimid dhaqaatiir kuwaasoo baaritaan kadib sheegay inuusan nuuxnuuxsanayn.
Maalin ka hor ayaa meydka ninkaa lagu aasay magaaladaasi Ottawa ayadoo duugtiisa Soomaali badan iyo Muslimiin kale oo badan ay ka qeyb qaateen.
Qaar ka mid ah dadkii mudaaharaadayay ayaa sheegay in ninkaa loo dilay si midab takoor ah.
Previous articleXaafadda Islii oo uu booqdey Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya.
Next articleMuhaajiriinta caalamka oo sanadkan 2016 noqdey sanadkii ay ugu dhimashada badnaayeen.